Mitsahatra ny fampianarana sy ny famoriam-bahoaka : tafiditra ny Coronavirus, vehivavy telo efa voany | NewsMada
Mitsahatra ny fampianarana sy ny famoriam-bahoaka : tafiditra ny Coronavirus, vehivavy telo efa voany
Nanao fanambarana ho an’ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny filoha Rajoelina, Andry, omaly. Nivoitra tamin’izany fa tafiditra eto amintsika tamin’ity herinandro ity ny Coronavirus. Vehivavy telo ny tratran’izany. Mitsahatra, noho izany, ny fampianarana sy ny famoriam-bahoaka rehetra…
“Nahazo ny valin’ny fitiliana teny amin’ny Insttitu Pasteur ny tenako ka nanamarina izy ireo fa misy olona telo mitondra ny Coronavirus eto amintsika. Tonga avy any ivelany avokoa ireo vehivavy telo ireo”, hoy ny filoham-pirenena. Nambarany fa vehivavy 41 sy 45 taona ary tovovavy 19 taona tonga tamin’ity herinandro ity avy any Frantsa sy nandalo tatsy Maorisy izy ireo ka teratany vahiny ny iray amin’izy ireo. “Tsy misy ahina ny toe-pahasalaman’izy ireo. Arahi-maso tanteraka ary efa noraisina an-tanana manontolo ny momba azy ireo eny Andotahatapenaka. Hotsaboina maimaimpoana ireo tratran’izany…”, hoy ihany izy. Natsidiky ny filoha fa efa fantatra avokoa ireo mpandeha niaraka amin’izy ireo ka efa natoka-monina.
Foana avokoa ireo hetsika sy fivorivoriana samihafa
Tsy niandry ela fa nohamafisina ny fepetra araka ny nanambaran’ny filoha azy. Foanana avokoa, manomboka anio, ireo fampisehoana. Hakatona ireo toerana mandray toeram-pilanonana. Foanana avokoa ny fifaninanana fanatanjahantena. Mikatona avokoa ny toeram-pianarana rehetra, hatrany amin’ny oniversite, manerana ny firenena. “Haharitra 15 andro izany fepetra izany. Arakaraka ny fivoarany ny andraisana ny fepetra manaraka”, hoy ihany ny filoha.
Mitohy ny asa aman-draharaha
Na izany aza, nanterin’ny filoha fa tsy midika hoe maty ny fiainana na mikatso. Mitohy ny asa aman-draharaha. Malalaka ny fifamoivoizana sy ny fifamezivezena. “Hajaina kosa ny fepetra ara-pahasalamana. Aoka hanaraka tsy tapaka ny fampahalalam-baovao sy ny lamina. Aoka tsy hokorontanin’ny vaovao tsy marina sy tsy marim-pototra”, hoy ihany izy. Nambaran’ny filoha fa tsy fotoan’ny fifanomezan-tsiny na ny fifanenjehana izao. Fotoan’ny fiaraha-mientana ahafahana miatrika ny sedra lalovan’ny firenena.
Nialoha izany, notsiahivin’ny filoha fa efa noraisina avokoa ny fepetra rehetra. Nihazakazaka anefa ny fihanaky ny Covid-19 maneran-tany. Nampanantena anefa ny filoha fa adidiny sy anjaran’ny governemanta ny miaro ny ain’ny Malagasy manotolo.